जात्रा मनाउन दुई दिन सार्वजनिक बिदा ! - Nice Television HD
जात्रा मनाउन दुई दिन सार्वजनिक बिदा !
१८ आश्विन २०७७, आईतवार ०९:५० 591 पटक हेरिएको
बनेपा । कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेका बेला पाँचखाल नगरपालिकाले जात्रा÷पर्व मनाउन दुई दिन बिदा दिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकका अन्य स्थानीय तहले भने स्थानीय शक्तिपिठमा जात्रा र मेला नभर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत उर्दी नै जारी गरेका छन् ।